ओलीविरुद्ध प्रचण्ड गर्जिन थाले, उस्तै परे प्रधानमन्त्री आँफै बन्ने ! – रिपोर्टर्स नेपाल
ओलीविरुद्ध प्रचण्ड गर्जिन थाले, उस्तै परे प्रधानमन्त्री आँफै बन्ने !
२०७५ माघ २५ गते प्रकाशित, l २३:४२
काठमाडौं, २५ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सम्बन्धमा दरार सुरु भएको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै अध्यक्षद्धयवीचको सम्बन्धमा भने उतारचढाव सुरु भएको छ ।
प्रचण्डको आजको अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र ठूलो पराकम्पन ल्याएको छ । तर, प्रचण्डले सबै कदम सोचेर नै चालेको पनि नेकपानिकट उच्च स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीको विधान देखाउदै ओली र प्रचण्ड विरुद्ध खनिए भिम रावल – हेर्नुहोस् भिडियो
‘मदन भण्डारीजस्तै हाम्रो पनि हत्या नहोला भन्न सकिन्न’